AKWAKWỌ AKWAKWỌ |
Mgbe ịkpụ ntutu, underarms ma ọ bụ ebe bikini, ịmịcha mmiri kwesịrị ekwesị bụ ihe mbụ dị mkpa. Ya adịla mgbe ị ga-akpụ afụ ọnụ gị n’ebughị ụzọ kpụọ mmiri na ntutu, n’ihi na ntutu isi kpọrọ nkụ na-esi ike ibelata ma mebie ọnụ ọnụ mma ya. Ube dị nkpa dị oke mkpa iji nweta nso, nkasi obi, iwe ...
Ọ bụrụ n ’ị chere ngbalị ụmụ nwoke na-ewepụ ntutu ihu bụ nke ugbu a, anyị enwetala ozi ọma maka gị. Enwere ihe akaebe nke mgbe ochie na, na Oge Nkume, ụmụ nwoke na-akpụ afere, ndị na-ahụ anya, ma ọ bụ ndị na-agba mbọ, ma ọ bụ na-eji ya eme ihe dịka tweezers. (Ouch.) Mgbe e mesịrị, ụmụ nwoke nyochara ọla kọpa, cop ...
Ise nzọụkwụ a oké ajị
Maka ịkpụ afụ ọnụ, ajị dị mma, soro usoro dị mkpa ole na ole. Kwụpụ 1: Saa ncha mmiri na mmiri ga-ewepu mmanụ dị na ntutu na anụ gị, ọ ga - ebido nro nro (ka mma, kpụọ mgbe ịsa ahụ, mgbe ntutu gị zuru ezu). Nzọụkwụ 2: Nwee ntutu dị nro bụ ụfọdụ n'ime ...